MT5 Indicator သည် | အခမဲ့ MetaTrader5အညွှန်းကိန်းဒေါင်းလုပ်
MT5 Editor ကို -
input parameters အတွက်ရရှိနိုင်အချိန်အပိုင်းအခြားရွေးချယ်မှု option နှင့်အတူ Cronex_Impulse_MACD ညွှန်ပြချက်: input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_H4; // indicator ဇယားကာလ (သတ်မှတ်ချိန်) ညွှန်ကိန်းသည် Cronex_Impulse_MACD.mq5 ညွှန်ပြချက်လိုအပ်သည်။.
input parameters အတွက်ရရှိနိုင် timeframe ရွေးချယ်မှု option နဲ့ CyberCycle ညွှန်ပြချက်: input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_H4; // indicator ဇယားကာလ (သတ်မှတ်ချိန်) ညွှန်ကိန်းသည် CyberCycle.mq5 ညွှန်ပြချက်လိုအပ်သည်။.
မီးပွိုင့်တစ်ခုအနေနှင့်အရောင်သတ်မှတ်ထားသည့် ColorSchaffMomentumTrendCycle ညွှန်ပြချက်. မီးခွက်များသည် ColorSchaffMomentumTrendCycle algorithm မှပြုလုပ်သောသက်ဆိုင်သောစျေးနှုန်းများတွက်ချက်မှုရလဒ်ကြောင့်ပေါ်လာသည်။. များစွာသော ...
ColorSchaffTrendCycle ညွှန်ပြချက်သည်မီးမောင်းထိုးခြင်းအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်. မီးခွက်များသည် ColorSchaffTrendCycle algorithm မှပြုလုပ်သောသက်ဆိုင်သောစျေးနှုန်းဆိုင်ရာစုံစမ်းမှုရလဒ်များ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်. များစွာသော ...
မီးပွိုင့်တစ်ခုအနေဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ထားသော ColorSchaffTriXTrendCycleCandle ညွှန်ပြချက်. မီးခွက်များသည် ColorSchaffTriXTrendCycleCandle algorithm မှပြုလုပ်သောသက်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်းတွက်ချက်မှုများကြောင့်ပေါ်လာသည်. များစွာသော ...
ColorSchaffRSITrendCycleCandle Metatrader5အညွှန်းကိန်း
ColorSchaffRSITrendCycle အညွှန်းကိန်းသည်မီးခွက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်. မီးခွက်များသည် ColorSchaffRSITrendCycle algorithm မှလုပ်ဆောင်သောသက်ဆိုင်ရာစျေးနှုန်းများတွက်ချက်မှုရလဒ်ကြောင့်ပေါ်လာသည်. များစွာသော ...
Input parameters ထဲမှာရရှိနိုင်တဲ့ timeframe selection option နဲ့ ColorSchaffWPRTrendCycle ညွှန်ပြချက်: input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_H4; // indicator ဇယားကာလ (သတ်မှတ်ချိန်) ညွှန်ကိန်းသည် ColorSchaffWPRTrendCycle.mq5 ညွှန်ပြချက်လိုအပ်သည်။.
input parameters အတွက်ရရှိနိုင်သည့် timeframe ရွေးချယ်မှု option နှင့်အတူ ColorSchaffTriXTrendCycle ညွှန်ပြချက်: input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_H4; // indicator ဇယားကာလ (သတ်မှတ်ချိန်) ညွှန်ကိန်းသည် ColorSchaffTriXTrendCycle.mq5 ညွှန်ပြချက်လိုအပ်သည်။.
input parameters အတွက်ရရှိနိုင်သည့် timeframe ရွေးချယ်မှု option နှင့်အတူ ColorSchaffRVITrendCycle ညွှန်ပြချက်: input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_H4; // indicator ဇယားကာလ (သတ်မှတ်ချိန်) ညွှန်ကိန်းသည် ColorSchaffRVITrendCycle.mq5 ညွှန်ပြချက်လိုအပ်သည်။.
input parameters အတွက်ရရှိနိုင်သည့် timeframe ရွေးချယ်မှု option နှင့်အတူ ColorSchaffRSITrendCycle ညွှန်ပြချက်: input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame = PERIOD_H4; // indicator ဇယားကာလ (သတ်မှတ်ချိန်) ညွှန်ကိန်းသည် ColorSchaffRSITrendCycle.mq5 ညွှန်ပြချက်လိုအပ်သည်။.
123...164စာမျက်နှာ 1 ၏ 164